The Best Ahịa nnweta Strategies Online | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 29, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ma ị masịrị ya ma ọ bụ na ọ masịghị gị, azụmaahịa ọ bụla nwere ọnụ ụzọ na-agbanwe agbanwe nke ndị ahịa na-abịa ma na-ala. Anyị niile nwere ike ime ihe na-abawanye njigide ma belata mmefu ndị ọzọ na mbọ ndị metụtara ịchọta ndị ahịa ọhụụ, mana ndị ahịa ochie ga-ahapụ maka ebumnuche na mpụga njikwa anyị.
ELIV8 haziri ihe ọzọ pụrụ iche infographic na 7 pụtara ìhè nnweta azum iji hụ na gị online ahịa azum na-arụ ọrụ na elu arụmọrụ.
Search Organic ka odi mkpa. Iji usoro ọdịnaya dị irè na iji ikpo okwu gị na ọdịnaya rụọ ọrụ nwere ike ịmegharị okporo ụzọ ọhụrụ. N'ezie, 80% nke ndị mmadụ na-eleghara mgbasa ozi akwụ ụgwọ ma kama na-elekwasị anya na nsonaazụ organic na 75% nke ndị mmadụ anaghị agagharị na peeji mbụ nke nsonaazụ ọchụchọ.
Ọkpụkpụ ikike - Mepụta ma kwalite ọdịnaya nke na-enweta backlinks site na saịtị ikike, ọdịnaya gị na weebụsaịtị ga-enweta ọkwa njin ọchụchọ dị elu ma nweta ndị ọbịa sitere na saịtị ndị dị mkpa na-ejikọ gị. Ikike ịkpụzi ikike nwere ike ime ka ọchụchọ ọchụchọ 250% bawanye na peeji ịchọrọ.
Marketing ahịa - Soro ndị na - eme ihe nkiri nwere ndị na - ege ntị ịchọrọ, wee mee ka ndị na - ege ntị wulite nke gị, ịnwere ike ịnweta ndị ahịa ọhụụ na ọsọ ọsọ. Ná nkezi, ahịa influencer na-ahụ nkwụghachi 6-to-1 na ntinye ego.
Ntuziaka 2-Sided - Maka ọtụtụ azụmaahịa, 65% nke azụmaahịa ọhụụ sitere n'aka ndị ahịa. Ntughari aka-uzo abuo bu ebe onye na-ezo aka na enyi ha nwetara ugwo maka isonye. Ndị mmadụ nwere ike ịzụta 2X karịa enyi zoro aka.
Ahịa-Lekwasịrị Anya Afọ - 61% nke ndị mmadụ na-ekwu na ha nwere ike ịzụta site na ụdị nke na-ewepụta ọdịnaya. Mgbe ị mepụtara infographics, whitepapers, na vidiyo nke na-eme ka onye ọbịa bia na oku, ị ga-abawanye ahịa.
email Marketing - Ihe ọ bụla $ 1 nọrọ na email nwere nkezi nloghachi nke $ 44 Automating gị ụzọ nurturing usoro na ezubere iche iji kwado ihe gị nnweta results. Azụmaahịa ahịa nwere ike ịbawanye ego site na 10% na naanị ọnwa 6-9
Analytics - 50% nke azụmaahịa na-esiri ike ịkọwa ahịa ozugbo na nsonaazụ ego. Chọpụta ụzọ ntụgharị gị kacha elu site na iji nchịkọta. Ulo oru ezughi ezu gosiputara mkpa odi ahia ROI.
Tags: Ntuziaka 2-kwadoronnwetaAnalyticsikike sculptahịa nnwetaemail Marketingahịa ahịanyocha ọchụchọreferralsahịa lekwasịrị anya ọdịnayaA
Dee 30, 2015 na 6: 10 AM
Mara mma kọwara 7 kacha mma ahịa azum maka ngwa ahịa ndị ahịa nnweta, nke a ga-enyere m azụmahịa na-eto eto nke ọma. Daalụ maka òkè.